ချစ်သူမိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်သော အမျိုးသားတိုင်း စွဲလမ်းကြသော လိင်စိတ်ဆန္ဒ (၁၀) ခု
သင်ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ ဘယ်ယောင်္ကျားကမှ လိင်အကြောင်းတွေကို ၂၄ နာရီစိတ်ကူးယဉ်မနေပါဘူး။ ယောင်္ကျားအများစု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသားပေးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို စိတ်လိုလက်ရကြည့်ကောင်းကြည့်နိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ဖြစ်ပျက်ဖို့အတွက်က ဒီလိုခံစားနိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာတွေကတော့ ယောင်္ကျားတိုင်း ခံစားရတတ်တဲ့ အဖြစ်များဆုံးစိတ်ဆန္ဒ (၁၀) ခုစာရင်းပါ။ ဒီခေါင်းစဉ်တွေက နည်းနည်းထိရှလွယ်တာကြောင့် ဆက်ကြည့်သင့် မကြည်သင့်ဆိုတာ ခဏရပ်ပြီး စဉ်းစားပါဦး။
၁။ သူက သင့်ဘက်က တိုက်ရိုက်စတင်လာမျိုးကို ကြိုက်ကြပါတယ်
သင့်အနေနဲ့ သူ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ဆိုရင် သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာကနေ တစ်ချို့အရာတွေကို ရှင်းပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မကြောက်ဘဲ တိုက်ရိုက်ပြောပြပါ။ လိင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာတွေကို ကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ဘူးဆိုတာကို သူ့ကို ပြောပါ။ ယောင်္ကျားတွေက သူတို့ရဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သူတို့အိပ်ယာထဲမှာ သူတို့လိုချင်တာတွေကို အတိအကျပြောတဲ့အခါ အမှန်တကယ်ကြိုက်ကြပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်က သူ့ကောင်မလေးကို အမှန်တကယ်ချစ်မယ်ဆိုရင် သူဟာ သူမစိတ်ကျေနပ်စေဖို့ ဘာမဆို လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြတာလောက် ကောင်းတာ ဘာတွေများရှိဦးမှာလဲ?
၂။ သူဟာ သင့်ရဲ့ visuals (ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး)အားလုံးကို နှစ်သက်ပါတယ်
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ အမြင်အာရုံမှာ တော်တော်လေးအားကောင်းတဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး adrenaling အပိုကို ရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကို အမှန်အတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ သင်တို့နှစ်ယောက်အတူနေချိန်မှာ မှန်ကို ရှေ့မှာ ချထားပါ။
၃။ သူ့အနေနဲ့ အိပ်ရာထဲက သင်ကြိုက်တဲ့အရာတွေအတွက် သင့်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေချင်တယ်
သင်က ထူးဆန်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဂိမ်းတွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောပါ။ ဒါမှမဟုတ် နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် သင့်သဘောပါပဲ။ တကယ့်အမှန်တရားက သင့်ကောင်လေးက ကြားချင်တယ်ဆိုရင်တောင် သင်က ရှက်လွန်းနေတာပါပဲ။ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်ပါတနာကို ရှက်နေ့ဖို့ မလိုပါဘူး။
၄။ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြုမူပါ
ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လောက် ဆိုးတာမရှိတော့ပါဘူး။ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြုမူပါ။ သင့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ စွဲမက်စေမယ့် အရာတစ်ခုခုလုပ်ကြည့်ပါ။
၅။ သူဘက်က အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ချင်တယ်
ဒီနေရာမှာ ဒရာမာတွေမရှိသလို စိုးရိမ်သောကတွေမရှိဘူး။ ပြင်းထန်တဲ့ နှလုံးခုန်သံတွေမရှိဘူးဆိုရင် ဒီအရာက သင့်ကို သေလုမတတ်ခံစားရစေတယ်မဟုတ်လား? ယောင်္ကျားတွေက သူတို့ကောင်မလေးတွေကို အိပ်ခန်းထဲမှာ မိဖုရားကြီးဖြစ်စေချင်ကြတယ်။ သင့်ရဲ့ ဆန္ဒကို မြင်ချင်ကြပြီးတော့ သင်အဲ့ဒီ့နေရာမှာ အမှန်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သေချာချင်ကြတယ်။
၆။ သူတို့က တစ်ခါတလေမှာ တစ်ခါတရံမှာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လိုပြုမူချင်ကြတယ်
ဆိုလိုတာက လိင်မှုကိစ္စတွေဖြစ်နေချိန်မှာ သင့်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းနာကျင်စေမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဥပမာ – သင့်အင်္ကျီကို ဆုတ်ဖြဲတာမျိုးက သူ့ကို ပျော်စရာကောင်းပြီး အရူးအမူးဖြစ်စေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် သူ့ကို စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအိပ်ပျော်နေချိန်မှာ အမူအရာအသစ်တွေကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၇။ တစ်ခါတရံ လုံးဝစိတ်မပါတဲ့ အချိန်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်
သင်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအစမှာ ဘယ်လိုပြုမူခဲ့လဲဆိုတာ သတိရပါ။ နှစ်ယောက်လုံးအိပ်ရာထဲမှာ အတူတူပွေ့ဖက်နေပေမယ့် ဘာမှဆက်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင် သင့်ဘက်က ဆွဲဆောင်ရမယ့်အချိန်ကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်လည်း လွှတ်ထားသင့်တဲ့အချိန်တစ်ခုပါ။
၈။ သူတို့က ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးခံချင်ကြတယ်
သင့်ကို အိပ်ရာထက်မှာ လွှမ်းမိုးစေချင်ကြပြီး သူကတော့ သင့်ရဲ့ အစေခံသက်သက်ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ သင်မပြောခင်အချိန်အထိ သူက သင့်ကို ထိလည်းမထိသလို နမ်းတာတွေလည်းမလုပ်ချင်သေးဘဲ သူ့ကို လာပြောစေချင်ကြပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အနူးညံ့ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကို တို့ထိခြင်းဖြင့် သူ့ကို ရူးသွပ်အောင်လုပ်ပါ။
၉။ သူတို့က ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်ကြတယ်
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ တစ်ခါတရံမှာ သူတို့ရဲ့ ပါတနာကို ဝန်ခံဖို့ ရှက်လွန်းတာကြောင့် မပြောဖြစ်ကြပေမယ့် အိပ်ယာထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကို စမ်းကြည့်ချင်ကြပါတယ်။ adrenaline အလုံအလောက်မြင့်လာတဲ့အခါ စိတ်ကို လွှတ်ချပြီး ထူးဆန်းတာတစ်ခုခုခုလုပ်ကြည့်ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံရောက်နေသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ သူက သင့်ကို သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်တွေအကြောင်း ပြောစေချင်ကြတယ်
ယောင်္ကျားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောလေ့ရှိသူတွေမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့ဟာ အားနည်းသူတွေ၊ ထူးဆန်းသူတွေလို့ အထင်ခံရမှာစိုးရိမ်ကြတာကြောင့်ပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက်မှာ ခိုင်မာတဲ့နှောင်ကြိုးတွေရှိတယ်လို့ သင်ခံစားရတယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပါ။ အိပ်ရာထက်မှာပဲ သင်တို့ကြိုးစားချင်တဲ့အရာတွေကို ဆွေးနွေးပါ။ စကားမပြောရင် နှစ်ယောက်စလုံး ဘယ်အရာတွေကို လိုအပ်ပြီး ဘာတွေကို လိုချင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က မခက်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေက တွေးခေါ်စဉ်းစားပုံခြင်း မတူညီတာကြောင့် အပြုအမူတွေက ကွဲပြားနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေ အကြောင်းပါပဲ။ နားထောင်ပေးလာမယ် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် နားထောင်ပေးနိုင်စွမ်း ပိုရှိကြပါတယ်။...
ချစ်သူစုံတွဲတိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ လူအမြင်ကပ်စေမယ့် လုပ်ရပ်တစ်ချို့
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲ မိုးမမြင်လေမမြင် အချစ်တွေပိုနေကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲ တွေနဲ့ ကြုံဖူးပါသလား။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်တာပဲ ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ ခေါင်းမာနေဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ နေနေသ၍တော့ ကိုယ့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်တတ်ဖို့ပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ချစ်သူစုံတွဲတိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ လူအမြင်ကပ်စေမယ့်လုပ်ရပ်တစ်ချို့ကို...
Relationship လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ မလွယ်ဘူးဆိုတာကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ချစ်သူကောင်မလေးဆီမှာ အမှတ်ရဖို့အတွက် ကြိုးစားရတာလည်း အမောပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးတွေကို နားလည်ရတာ အင်မတန်ခက်ခဲလွန်းပါတယ်နော်။ နားလည်သလိုလိုနဲ့ နားလည်ရခက်တဲ့အထဲမှာ မိန်းကလေးတွေက ထိပ်ဆုံးကပါတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလို နားလည်ရခက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အမျိုးသားတွေအပေါ်မှာ မျှော်လင့်တတ်တဲ့...
ခေးတွေကိုသဘောကျတဲ့ ကိုကိုတွေ ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်သူနဲ့တွဲမယ်ဆို ကြိုသိထားသင့်တဲ့အရာများ
တချို့အမျိုးသားတွေက ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးပြီး ဦးဆောင်တက်တဲ့မမတွေကို သဘောကျသလို တချို့ကလည်း ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့ ခေးတွေ ရဲ့ ကိုကိုတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ခေးတွေ ကိုသဘောကျတဲ့ ကိုကိုတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်သူတွေနဲ့ တွဲမယ်ဆိုရင် ကြိုတင်သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ (၁) ချွဲတာခံနိုင်ရမယ် ကိုယ့်ထက်...